Goobaha Soo Dejinta Subtitles Bilaashka ah ee ugu Fiican (2020) - Madadaalo
Goobaha Soo Dejinta Subtitles Bilaashka ah ee ugu Fiican (2020)
Subtitles waa qayb ka mid ah nolol maalmeedkeena markay tahay madadaalada. Way ku caawin laheyd haddii aad iyaga u heli laheyd dabagal sahlan oo muujinaya bandhigyada iyo filimada aad ugu jeceshahay. Waxaan kordhinay isticmaalkayaga madadaalada mudo dheer hada. In yar oo naga mid ah ayaa laga yaabaa inaysan noqonin taageerayaal waaweyn oo subtitles ah sababtoo ah xannibaadda ay la yimaadeen.
Tilmaamahan, waxaan eegeynaa xulashooyinka cajiibka ah ee aad isticmaali karto. Isku day kuwaan maanta si aad uga heshid waxyaabaha aad ka hesho. Xulashadayada ugu sareeya ayaa kaa caawin doona inaad sifiican uga soo baxdo inta aad u baahan tahay fiidiyowga. Halkan fiiri oo ka hel qulqulka hadda.
Liistada Goobaha Soo Dejinta Ugu Wanaagsan:
Subtitles waa siyaada maalin kasta u dhan oo dhan Movies weyn iyo Bandhigyada TV-ga . Dadka qaarkiis waxay ugu baahan yihiin faham fiican oo ku saabsan bandhigyada.Dad badan ayaa laga yaabaa inaanay sifiican u fahmin lahjadaha kala duwan ee Ingiriisiga. Waxay kaa caawinaysaa inaad si cad uhesho wadahadalka iyo dhagarta. Kuwani sidoo kale waa hab weyn oo lagu horumariyo amar xoog badan oo ku saabsan luuqadda. Waa kuwan qaar ka mid ah boggaga internetka ee kala duwan oo leh xogta ugu weyn ee subtitles hadda.
1. Furan Cinwaanno
Tusmada -Cinwaanno taxane ah oo filim iyo TV ah
Websaydhada 'Open Subtitles' ayaa si weyn caan uga ah bulshada dhexdeeda. Waa bogga lagu tago malaayiinta isticmaale ee internetka. Waxaad si fudud ugu qulquli kartaa waxyaabaha ka dhex mara barmaamijkan. Isticmaalayaasha ayaa soo dejisan kara cinwaanada hoose ee loogu talagalay dadka caanka ah iyo filimadii ugu dambeeyay. Isku xirka websaydhkani waa mid loo baahan yahay. Waxay soo socotey oo socotey tobanaan sano hadda. Waxaad ka heli kartaa dhammaanba filimada caanka ah iyo barnaamijyada TV-ga halkan. Websaydhku wuxuu leeyahay qeexitaanno qaas ah iyo astaamo.
Kuma koobna daawadayaasha Ingiriisiga. Waxaad kala soo bixi kartaa subtitles ku dhowaad luuqad kasta. Isticmaalayaasha ku soo dejista waxyaabaha qadka tooska ah waxay uga faa'iideysan karaan barmaamijkan si fudud u soo dejisan. Madal-il furan ayaa gebi ahaanba bilaash u ah qof walba inuu marin u helo.Websaydhku wuxuu kaloo bixiyaa google chrome kordhin si loo aqoonsado fudud. Isticmaalayaasha ayaa u soo dejisan kara aqoonsi deg deg ah.
Websaydhku waxaa ka buuxa subtitles lama ilaawaan ah oo loogu talagalay isticmaalkaaga filinka. Kuuma deeqayo subtitles TV. Waxaad hubsan kartaa inaad ka heli karto subtitles-kaaga filimada ee loo baahan yahay si fudud adigoo u maraya barxaddan. Waxaan kugula talineynaa dhamaan akhristayaashayada. Isku xirnaanta adeegsaduhu waa mid fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala ee ku raaxeysta qulqulka waxyaabaha. Waxay leedahay xog ururin aad u ballaaran oo si fudud loo soo dejisan karo. Waxaa jira subtitles dhammaan luqadaha muhiimka ah ee laga heli karo degelkan.
Waxaan si badbaado leh u dhihi karnaa in dhammaan baahiyaha cinwaankaaga filimku ay halkan ka shaqeynayaan. Astaamaha raadinta ayaa ka dhigaya soo dejintaada mid fudud isticmaalka muddada dheer. Waxaad ka heli kartaa cinwaanno hoosaadyo in ka badan 20,000 oo filim ah websaydhka. Kuwani sidoo kale waxaa loo qoondeeyey xarfo ahaan si loo caddeeyo.
YTS Subs waa degel caan ah oo ku siinaya subtitles-kii ugu dambeeyay ee dhammaan soo dejinta daadkaaga. Waa degel aad caan u ah oo leh xog-ururin fantastik ah.Boggu wuxuu hayaa subtitles dhammaan filimada laga heli karo Yify. Waxay ka caawineysaa isku duubnida fudud ee ilahaaga maqalka iyo muuqaalka.
Waxaan sidoo kale jecel nahay interface-ka isticmaalaha. Waxay ka dhigeysaa websaydhka mid sahlan oo lagu baadi goobayo inta la raadinayo cinwaan cinwaan ah. Isticmaalayaashu waxay kala soo bixi karaan waxyaabaha ay jecel yihiin halkan si fudud. Waxyaabaha ku jira barxadda waxay u adeegsadaan tabs urur fudud oo wax ku ool ah noocyo kala duwan. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa dejinta luqadaha kala duwan.
Tusmada -Filimaan iyo Bandhigyo TV
Websaydhka qaawan ayaa ku siinaya adiga waxyaabaha ugu dambeeyay si fudud. Isticmaalayaashu si fudud ayey uga soo dejisan karaan hoosaadyadooda ay jecel yihiin halkan. Websaydhku wuxuu helaa warar joogto ah oo ku saabsan bandhigyada ugu fiican iyo filimada .Waa aalad raadin sahlan oo ku saabsan websaydhkooda. Isticmaalayaasha waxay abuuri karaan koonto fudeyd leh si ay u keydiyaan soo degsigooda.Waa adeeg fudud oo aan lahayn wax dhib ah oo waaweyn. Waxaan kugula talineynaa inaad ku raaxeysatid khibrad hufan oo madadaalo leh adoo adeegsanaya adeeggan.
Bulshadu sidoo kale waxay ku soo shuban kartaa hoosta barnaamijyadooda ay jecel yihiin. Way fududahay in loo isticmaalo qof walba. Waxaad ka heli kartaa cusbooneysiin deg deg ah dhinaca midig ee bogga. Waxaa ka mid ah raadinta ugu sareysa ee ugu dambeysay madal sidoo kale. Waad ka hubin kartaa waxa hadda ka socda golaha.
Tusmada -Filimaan, bandhigyo TV, iyo Fiidiyowyo Muusig ah.
Websaydhka SubDivx waxaa ka buuxa subtitles adduunka oo dhan. Waa degel caalami ah oo leh wax kasta oo aad u baahan tahay. Websaydhku waa sahlan yahay in loo isticmaalo qof walba. Isticmaalayaashu waxay ka faa'iideysan karaan barxadda si ay u soo dejistaan ​​wax kasta oo ay u baahan yihiin. Waa hagaajinta ugu fiican ee fiidiyowgaaga iyo xalka maqalka.
Qaabeynta degelku waxay ku qoran tahay luqad kale. Websaydhku wuxuu kaloo bixiyaa cinwaanno loogu talagalay fiidiyowyada muusikada oo ku qoran luqado kale. Boggu wuxuu ku habboon yahay dhammaan isticmaaleyaasha isku dayaya inay fahmaan waxyaabaha ka socda adduunka oo dhan. Waa lagama maarmaan in akoon laga sameeyo websaydhka.
Tusmada -Filim iyo bandhigyo TV
Websaytka cinwaanka cinwaanka ayaa ka buuxa waxyaabo adduunka oo dhan ka kooban. Way fududahay in la iska dhex maro iyadoo la adeegsanayo muuqaalka raadinta. Isticmaalayaashu waxay raadsan karaan qoraallo hoosaadyo oo laga heli karo khadka tooska ah ee filimmada iyo barnaamijyadooda ay jecel yihiin. Waxaan kugula talineynaa inaad iskudaydo degelkan si aad uhesho caawimaad fudud.
Waxay leedahay qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan internetka. Isku xirka isticmaalaha ayaa lagama maarmaan ah, laakiin uma baahnid wax badan marka laga hadlayo soo degsashada cinwaanada hoose.
Websaydhku waa mid caan ku ah dadka ku raaxeysta daawashada waxyaabo badan. Waa madal fudud oo haddana waxtar leh oo wax walba xakameysa. Waxaad kala soo bixi kartaa subtitles adduunka oo dhan. Isku xirnaanta adeegsaduhu waa mid cajaa'ib leh oo wuxuu kuu xaqiijinayaa inaad leedahay waayo-aragnimo dhiraandhiriyen oo cajiib ah
Waxaad iska diiwaangelin kartaa bogga si joogto ah isticmaale ahaan. Deegaanka beeshu waxay ka dhigeysaa dhammaan dadka inay ku hawlan yihiin oo firfircoon yihiin. Users sidoo kale waxay ku soo rogi karaan cinwaan hoosaadyada waxyaabaha ay ka helaan boggan. Bulshada degelku waa waxa ka ilaaliya waxyaabaha socda.
Bogagga soo dejinta subtitles waa dhif iyo naadir in la helo maalmahan. Dhawr xul ah ayaa leh dhammaan waxyaabaha ka shaqeynaya. Way adkaan kartaa in la raadiyo qoraal-hoosaadyo gebi ahaanba la jaan qaadaya maqalkaaga iyo fiidiyahaaga. Hagahan, waxaan isku dayeynaa inaan ku siino xalka ugu fiican ee la heli karo. Isku day kuwaan maanta oo aad la kulantid waxyaabo cinwaan hoosaad kaamil ah.
Goobaha Bixinta Filimka Bilaashka ah (2020)
Sidee loo soo Degsadaa Fiidiyowyada Twitter & Gifs?
Sidee Loo Helaa Dhageysiga 30 Maalmood Bilaash ah?
amazon Ra'iisul ee ardayda kulliyadda free
sida aad u heli Safari on daaqadaha
app chromecast for laptop daaqadaha 10
Streaming on Samsung tv smart
free downloads full hd movies